समाचार - हाम्रो पीएलए स्ट्रउको बारेमा प्रकृति संस्थापक लूनासँग अन्तर्वार्ता
हाम्रो पीएलए स्ट्रउको बारेमा प्रकृति संस्थापक लूनासँग हस्तक्षेप गर्नुहोस्
Q1: PLA के हो?
Luna: PLA भनेको Polylactic Acid हो। यो कन्टेन स्टार्च, कासावा, उखु र चिनी बीट पल्प जस्ता किण्वित बोटबिरुवाबाट नियन्त्रण गरिएको सर्तमा बनेको हुन्छ। यो पारदर्शी र कडा छ।
Q2: के तपाईका उत्पादनहरू अनुकूलन योग्य छन्?
Luna: हो। हामी निजीकृत उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दछौं, जस्तै प्रिन्टिंग लोगो, ग्राफिक डिजाइनहरू र स्ट्रॉमा स्लोगन, ग्राहकले निर्दिष्ट गरेको प्यान्टोन र toको अनुरूप रंगीन स्ट्राहरू। त्यहाँ पीएलए स्ट्रुको एक वर्धित संस्करण पनि छ कि भनेर उनीहरूले डिस्पोजेबल कपहरू ढाक्ने फिल्ममा प्रवेश गर्न सकीन्छन्, विशेष गरी हाम्रो बबल-चिया-पसल ग्राहकहरूको लागि डिजाइन गरिएको।
Q3: PLA स्ट्रॉहरू कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ?
लुना: बबल चिया पसलहरू, कफि पसलहरू, बारहरू, क्लबहरू, संयमहरू, घरमा र पार्टीहरू।
Q4: बायोडिग्रेडेबल स्ट्राहरू इतिहास बनाउँदैछ, किनकि विश्व एकल प्रयोग प्लास्टिक (SUP) बाट टाढा सर्छ। हाम्रो लागि स्टोरमा SUP को लागि अरू के नयाँ विकल्पहरू छन्?
लुना: रेष्टुरेन्टहरू र चिया घरहरूमा प्लास्टिकको प्रयोगको कटौती पर्याप्त छैन। हामीले औद्योगिक पराल क्षेत्रमा इको-मैत्री समाधानहरूको आवश्यकता देख्यौं, जस्तै सानो यू-आकारको र टेलिस्कोपिक स्ट्रु जस्तै बच्चाहरूको जुस र दुध बक्सहरूमा संलग्न।
यसको मतलब ०.२ inches इन्च / .5.। मिलिमिटरको सानो आकारको निर्माण गर्ने र कडा स्ट्राहरूका लागि अझ परिष्कृत पीएलए रेसिपी विकास गर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नु हो जुन कि पेय बक्सको छापबाट बाहिर जान सक्दछ। यसका साथै हामी विश्वका प्रथम उत्पादकहरू मध्येका हौं जसले ताप-प्रतिरोधी पीएलए स्ट्रु प्रदान गर्छन्। हाम्रो स्ट्राहरू तापमान 80० डिग्री सेल्सियससम्म प्रतिरोध गर्न सक्दछ।
Q5: भुँडी गिराउन कति समय लाग्छ?
लुना: हाम्रा उत्पादनहरूको बायोडिग्रेडेबिलिटी र कम्पोस्टबिलिटीले टीयुभी अस्ट्रिया, ब्यूरो भिटास र एफडीएद्वारा सञ्चालित परीक्षणहरू पार गर्यो। औद्योगिक कम्पोस्टिंग वातावरणमा, पराल १ 180० दिनमा पूर्ण रूपमा टुक्रिन्छ।
घर कम्पोस्टिंग वातावरणमा, पीएलए स्ट्र स्ट्र लगभग २ बर्षमा पूर्ण रूपमा गिर्दछ। (भान्साको फोहोरसँग कम्पोस्ट)।
प्राकृतिक वातावरणमा, पराललाई पूरै गिराउन करिब to देखि years वर्ष लाग्छ।
Q6: कति गर्मी प्रतिरोधक तपाइँको PLA पराल हुन सक्छ?
लुना: हाम्रो पीएलए स्ट्रुको अधिकतम ताप-प्रतिरोधात्मक तापमान temperature० डिग्री सेल्सियस छ।